Abakhiqizi bokutholwa kwedatha Abakhiqizi - China Suppliition unit Suppliers, Factory
Ukugxiliswa kwe-DJGZ23-SW10 kungumkhiqizo wakamuva omuhle owenziwe nguSenwei. Kuhlanganisa ubuchwepheshe besimanje bokuxhumana ngeselula, ubuchwepheshe bamakhompiyutha, ubuchwepheshe bokulinganisa amandla. I-Adopt GPRS (CDMA noma inethiwekhi enentambo) nesiteshi sokuqapha ukuqaphela ukuhanjiswa kwedatha ekude, qaphela ukuqoqwa kwedatha ngesampula esheshayo ye-AD, futhi uqaphele ukucubungula idatha, ukuqoshwa kwedatha nokugcinwa kwedatha ngokusebenza kweprosesa ephakathi.
I-SW-TCP232-304 iseva ye-serial port eyi-RS485, usayizi omncane, izindleko ezinqobekayo, qaphela i-RS485 kuya ku-Ethernet yokufuna ukucacisa izinto ngokusobala okusobala; ne-1 Ethernet port, isilinganiso se-10 / 100Mbps; ukusekela ukuqala kabusha kwesikhathi sokusekela, i-DHCP ithole ngokuzenzakalelayo ukulungiswa kwegama lesizinda se-IP DNS, ukuthuthukisa okukude, umsebenzi we-port serial; ukusekela idatha yesiko lokushaya ukuze ususe izixhumanisi ezingenamsebenzi; iphakheji yokubhalisa ngokwezifiso ukuthola isimo sokuxhuma.
I-SW-GPRS232-734 isisetshenziswa sokudlulisela amandla okusabalalisa amandla se-RS485 i-GPRS DTU, ethola umsebenzi wokuhambisa izinto obala osobala osuka ku-RS485 uye kwi-GPRS; isekela ukufinyelela kwenethiwekhi kwe-GSM / GPRS; Ukuvikelwa kokuhlukaniswa kwesekethe kwe-RS485, amandla aqinile wokulwa nokuphazamiseka; isekela iziteshi eziyi-4 ze-Socket ngesikhathi esisodwa online; isekela i-TCP, UDP; sekela ukudluliselwa kwe-SMS okusobala, ukuhanjiswa okusobala kwenethiwekhi, i-HTTPD, i-UDC nezinye izindlela; sekela imiyalo eyisisekelo esethiwe kanye nesethi yemfundo eyeluliwe; ukusekela i-5-36V ebanzi yamandla kagesi, i-DC kanye nezinketho zokuhlinzeka kwamandla esiginali.